रोचक खबर Archives - Darsan Post
एजेन्सी । वैज्ञानिकहरुले मानिसको शरीरमा एक नयाँ अंग पत्ता लगाएका छन् । नेदरल्याण्डका वैज्ञानिकहरुले एक नयाँ क्यान्सरबारे खोज गरिरहेको बेला उनीहरुले घाँटीमा एक नयाँ अंग पत्ता लगाएका हुन् । खोजकर्ताहरुले मानिसको घाँटीको माथिल्लो भागमा ग्रन्थीहरुको एक समुह फेला पारेका हुन् । वैज्ञानिकहरुले शरीरमा पत्ता लगाइएको यस अंगको Tubarial salivary glands दिएका छन् । यसले नाकलाई […]
१२ कार्तिक २०७७, बुधबार १४:२२ Dpost352LeaveaComment on समुन्द्री राक्षसको ९ वटा दिमाग र ३ वटा मुटु हुन्छ !
एजेन्सी । पृथ्वीमा लाखौं जीव जन्तुहरु छन । सबैका आ–आफ्नै प्रजाति, बिशेषता र आकारहरु रहेका हुन्छ । जसमध्ये कुनै कुनै जीव निकै विचित्र खालका पनि छन । जसलाई देखेर हामीलाई अचम्म पनि लाग्छ । यीनै मध्येको एक हो– अक्टोपस । यो जीव समुन्द्रको गहिराई देखि तटीय क्षेत्रमा बस्छ । यो जीव विहान बेलुकाको समयमा खानाको […]
३ चैत्र २०७६, सोमबार १०:२९ Dpost778LeaveaComment on किन मन पराउछन् पूरुषले यस्ता युवती
सामान्यतया स्लिम केटीहरु आर्कषक हुने मान्यता रहँदै आएको छ । तर अहिले एक अनुसन्धानले यो कुरालाई गलत बताएको छ । अनुसन्धानमा के खुल्यो भने अधिकांश पुरुषहरु मोटी महिला मन पराउँछन् । यसका कारणहरु पनि धेरै रहेका छन जसमा सबैभन्दा पहिलो कारण मोटी केटीहरु श्रीमानलाई धेरै माया गर्छन र हरेक समयमा साथ दिन्छन भन्नुको अर्थ सजिलैं […]
२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १०:१२ Dpost396LeaveaComment on जन्मने बित्तिक्कै शिशु रिसाएपछि
एक नवजात शिशुको तस्वीर अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ। यसको मुख्य कारण भनेको नवजात शिशुको एक्सप्रेशन। यो घटना ब्राजिलको रियो डी जेनेरियो अस्पतालको हो। १३ फरवरीमा एक महिलाले शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन्। नाभी काट्नु अघि चिकित्सकले शिशुलाई रुवाउने कोशिस गरे। त्यसक्रममा नवजात शिशुले देखाएको प्रतिक्रियाबाट चिकित्सक छक्क परेका छन्। चिकित्सकका अनुसार शिशु जन्मिने समयमा […]
१ महिनामै २ पटक सुत्केरी, युवतीले जन्माइन् ३ बच्चा
१८ फाल्गुन २०७६, आईतवार १४:०१ Dpost570LeaveaComment on १ महिनामै २ पटक सुत्केरी, युवतीले जन्माइन् ३ बच्चा
प्रकृतिको चमत्कारका अगाडि विज्ञानले फेल खान्छ । हालै बंगलादेशमा एकजना महिलाले यो कुरालाई पुष्टि गरिदिएकी छन् । ती महिला एक महिनाभित्रैमा तीन पटक आमा बनेकी छन् । कुनै पनि महिलाले एक महिनाभित्रैमा दुई पटक सुत्केरी भएर तीनवटा बच्चा जन्माएको घटना विश्वमै पहिलो पटक भएको बताइएको छ । ती ्कीर्तिमानी महिलाको नाम आरिफा सुल्तान हो । […]
१८ फाल्गुन २०७६, आईतवार १३:५१ Dpost498LeaveaComment on काममा निदाएको समेत पैसा दिने यस्तो अचम्मको कम्पनी !
तपाइ कुनै कम्पनीमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने तपाइलाई काम गरेबापत रकम दिन्छ तर संसारमा यस्ता कम्पनिहरु पनि छन् जुन कम्पनीले सुतेबापत आफ्ना कर्मचारीलाइ रकम भुक्तानी गर्दछन् । तपाइलाई यो कुरा सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । तर अब तपाईले यो कुरालाई पत्याउनु पर्छ । किन भने जापानमा एउटा यस्तो कम्पनी छ । जस्ले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई सुतेबापत रकम […]
१८ फाल्गुन २०७६, आईतवार १३:४९ Dpost530LeaveaComment on रक्सी खाएपछि नेपालीहरू किन अंग्रेजी बोल्छन्, वैज्ञानिक व्याख्या !
जब रक्सी भित्र छिर्छ, नेपालीहरुको अंग्रेजी बाहिर आउँछ’ भन्ने भनाइ हामी सबैले सुनेका छौं। कतिपय अवस्थामा अलिअलि अंग्रेजी बोल्न जानेको मान्छे नसामा धाराप्रवाह बोलेको सुनेका पनि छौं।हामी ठान्छौं, रक्सीको सुरमा अंग्रेजी बोल्ने वा बोल्न खोज्ने मान्छेले नाटक गरेका हुन्। के साँच्चै नाटक गरेका हुन्रु वा, यसरी अंग्रेजी बोल्नुको पछाडि कुनै वैज्ञानिक कारण पनि छरुहामीले लामो […]
२७ माघ २०७६, सोमबार २०:५९ Dpost362LeaveaComment on अविवाहित महिला विश्वमा सबैभन्दा खुसी ! यस्तो छ करण …
एजेन्सी : एक नयाँ वैज्ञानिक अनुसन्धानले बालबच्चा नभएका अविवाहित महिलाहरू विश्वका सबैभन्दा खुसी मानिसमा पर्ने देखाएको छ। शीर्ष मनोविश्लेषकहरुको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो। एक्लो जीवन बिताइरहेका र बालबच्चा नभएका महिलाहरू घरेलु जिम्मेवारीको बोझ उठाइरहेका आफ्ना साथीहरूको तुलनामा अधिक स्वस्थ र लामो जीवन जिउने गरेको वेल्सस्थित प्रोफेसर डोलानले बताएका हुन्। डोलान ‘लन्डन स्कुल […]
२४ माघ २०७६, शुक्रबार २१:३७ Dpost467LeaveaComment on विश्वकै सबैभन्दा सानो गाई, शेयर गर्नुहाेस
हालै अमेरिकामा एउटा एकदमे सानो गाई भेटिएको छ । सामान्य गाईको तुलनामा यो गाईको तौल ४.५ किलो रहेका छ । यो गाई विश्वकै सबैभन्दा सानो गाई हो । सामान्य गाईभन्दा १० हिस्सा सानो यो गाईको नाम लिटिल बिल हो । यो बाच्छोलाई जन्मने बित्तिकै अमेरिकाको मिसिसिपी स्टेट यूनिभर्सिटी कलेज अफ भेटेरिनरी मेडिसिनमा लगिएको थियो । […]
२३ माघ २०७६, बिहीबार १४:१३ Dpost468LeaveaComment on विश्वको सबैभन्दा ठूलो झिंगाको कहानी
सन् २०१२ मा दक्षिण भारतीय चलचित्र ‘मक्खी’ प्रदर्शनमा आएको थियो । चलचित्रको मुख्य भूमिकामा एउटा यस्तो झिंगाको बारेमा देखाइएको थियो जो साधारण झिंगाभन्दा फरक थियो । हामी यस्तै एक असाधारण झिंगाको बारेमा हामी तपाईंलाई जानकारी गराउँदैछौँ । दुनियाको सबैभन्दा ठूलो झिंगाको खोजी गरिएको छ । यसको आकार मानिसको औँला जति नै ठूलो छ । दशौँ […]